Akụkọ Bible: Site n’Ọmụmụ Jizọs Ruo n’Ọnwụ Ya - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
E zigara mmụọ ozi Gebriel ijekwuru otu nwa agbọghọ ọma aha ya bụ Meri. Ọ gwara ya na ọ ga-amụ nwa nke gaje ịbụ eze ruo mgbe ebighị ebi. A mụrụ nwa ahụ, bụ́ Jizọs, n’ụlọ anụ, bụ́ ebe ndị ọzụzụ atụrụ bịara leta ya. E mesịa, otu kpakpando duuru ndị ikom si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ bịa n’ebe nwata ahụ nọ. Anyị ga-amata onye mere ka ha hụ kpakpando ahụ na ụzọ e si zọpụta Jizọs mgbe a nwara igbu ya.
Ọzọkwa, anyị ga-ahụ Jizọs, mgbe ọ gbara afọ iri na abụọ, ka ọ na-agwa ndị ozizi okwu n’ụlọ nsọ. Afọ iri na asatọ mgbe e mesịrị, e mere Jizọs baptizim, o wee malite ọrụ nke ikwusa na ịkụzi banyere Alaeze ahụ, bụ́ ihe Chineke zitere ya n’ụwa ime. Iji nyere ya aka n’ọrụ a, Jizọs họpụtara ndị ikom iri na abụọ ma mee ha ndịozi ya.
Jizọs rụkwara ọtụtụ ọrụ ebube. O ji azụ̀ nta ole na ole na ógbè achịcha ole na ole nyejuo ọtụtụ puku mmadụ afọ. Ọ gwọrọ ndị ọrịa, ọbụna mee ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie. N’ikpeazụ, anyị ga-amụ banyere ọtụtụ ihe ndị mere Jizọs n’ụbọchị ikpeazụ nke ndụ ya, na ụzọ e si gbuo ya. Jizọs kwusara ozi ọma ihe dị ka afọ atọ na ọkara, ya mere, NKEBI NKE 6 na-akọ ihe mere n’ime oge ji obere ihe karịa afọ iri atọ na anọ.